IAG kwindlela enqamlezileyo kwi-Ibex | Ezezimali
Elinye lamaxabiso anokubangela umdla ngakumbi ukuthatha izikhundla ngeli xesha yinkampani yendawo ye-AIG, kuba ibekwe malunga ne-4,50 euro ngesabelo ngasinye. Ixabiso ngokweembono zabanye abahlalutyi bezemali elinokuthi lithathelwe ingqalelo njengelungelelanisiweyo kulindelo lwakho lwangoku. Kodwa emva kokuba iphuhlise ukuhla okucacileyo ukusuka kwi-7 euro kwaye oko kuye kwakhokelela kurhwebo kwelinye lawona manqanaba asezantsi kwiminyaka yakutshanje. Inyani enokukhokelela kwinxalenye elungileyo yabatyali mali abancinci nabaphakathi ukuba bathathe izikhundla kwixabiso.
Ngayiphi na imeko, le yinkampani edwelisiweyo eya kuthi ixhomekeke kwizinto ezimbini ezibaluleke kakhulu. Kwelinye icala, indlela iBrexit eza kuphuhla ngayo kwiinyanga ezizayo kwaye, kwelinye icala, uguquko kwi Ixabiso leoyile ekrwada. Zombini ezi zinto zixabisekileyo aziloncedo kakhulu kwimidla yenqwelomoya kwaye yiyo ebangele ukuba abatyali zimali abaninzi baphume kwizikhundla zabo ngokukhawuleza kwiinyanga ezintandathu zokugqibela zonyaka.
Ngelixa kubonakala ngathi amaxabiso abo atshiphu, akukho nyaniso inyanisekileyo kukuba le nkampani ikwimeko entle ngokwenyani kwezi zinto zikhankanywe ngasentla. Ngokusekwe kubo, akukho mathandabuzo ukuba isenzo sabo siya kuhamba kwelinye icala kwaye iya kuba sisiphumo sempumelelo okanye hayi kwimisebenzi yakho kwiimarike ze-equity ukusukela ngoku. Ukuza kuthi ga ngoku, izinto azijongeka zilungile kubanini zabelo be-IAG. Ukuya kwinqanaba lokuba yenye yexabiso eliphambili lee-equities zesizwe.
1 IAG: kwi-downtrend ecacileyo
2 Ngesabelo esi-8%
3 Ngaphandle kokhuphiswano kwimarike yemasheya yaseSpain
4 Inkxaso kwi-4,50 euro
5 Ukufunyanwa kwenqwelomoya entsha
6 Ukuvela kwezithuthi zabakhweli
IAG: kwi-downtrend ecacileyo
Okwangoku akukho nto icacileyo kwaye izihloko zabo zibhaptiziwe yintshukumo esezantsi yobunzulu obukhulu. Isitshixo sixhomekeke kwinto yokuba oku kuthengisa ngoku kuya kuyeka ukungena ngesiqinisekiso esikhulu sempumelelo kwizikhundla zabo. Ukuza kuthi ga ngoku ihambile Uluhlu olubanzi kakhulu olusuka kwi-4 ukuya kwi-8 ye-euro ngesabelo ngasinye. Ngaba zombini izixhasi zinokwaphulwa? Oku kuhlala kubonakala kwiiveki ezizayo kwaye nangayiphi na imeko kungoku nje kwinqanaba lejelo, elenza ukuba imisebenzi ibe yingozi ukusukela ngoku.
Ukongeza, ayinakulityalwa ukuba i-IAG iya kuxhomekeka kakhulu kwinto enokwenzeka nge ukuphuma kwe-Great Britain kwi-European Union. Ngale ndlela, asinakulibala ukuba le yenye yeenkampani ezidwelisiweyo ezinokusebenza gwenxa kwezi nyanga zidlulileyo. Ngokuwa okubaluleke kakhulu okuye kwalonakalisa ulindelo olwenziwe phakathi kwabatyali mali abancinci nabaphakathi. Okwangoku, akukho zibakala zibalulekileyo zokucinga ukuba imeko itshintshile xa kuthelekiswa neenyanga ezidlulileyo.
Enye yezinto ezintle ze-IAG kukuba isasaza phakathi kwabanini zabelo esinye sezona sabelo sikhulu kwizabelo zamashishini esizwe. Ngomyinge wenzala kufutshane ne-8%, nangaphezulu kwamacandelo afana nombane okanye ukubhankisha. Inokuba sesinye sezizathu zokuthemba eli xabiso kule minyaka imbalwa izayo. Kodwa umbuzo omkhulu obonelelwa yinqwelomoya kukuba ingaba uza kubanakho na ukuthelekisa le ntlawulo kule minyaka izayo. Yonke idatha ayenzi ukuba sikrokre ukuba ayizukuba njalo. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, yonke imiqathango iyafezekiswa ukuze kubekho ukuncipha okukhulu kulo mvuzo wabanini zabelo. Ngokuwa okubaluleke kakhulu okuye kwalonakalisa ulindelo olwenziwe phakathi kwabatyali mali abancinci nabaphakathi.
Ngelixa kwelinye icala, ukuba oku kuyenzeka ukuncitshiswa kwesahlulo kukho umngcipheko wokuba abatyali mali bayobaleka bekhangela olunye ukhuseleko olunenzuzo ngakumbi ngalo mbono. Ngomnye umngcipheko onokuthi ucinge xa ​​uvula izikhundla kwi-IAG. Kwaye into enokwenzeka ukuba yenzeke ngaxa lithile ukusukela ngoku. Ngokukodwa, kuxhomekeke kwinto eyenzekayo ukuphuma kwe-Great Britain kwi-European Union. Ngale ndlela, lolunye ukhuseleko olunika ukungathandabuzeki kwiimarike zezabelo zamazwe. Kwaye le yinxalenye yokuba ngaphandle kwamathandabuzo kuya kufuneka uyivavanye ngqongqo olukhulu.
Ngaphandle kokhuphiswano kwimarike yemasheya yaseSpain
Enye into ekufuneka uyivavanye malunga nokuziphatha kwayo kukuba phantse akukho khuphiswano kwimarike yesizwe eqhubekayo. Nje Vueling Yenye inqwelo moya edweliswe kwimarike yaseSpain kwaye oku kukhuthaza yonke inkunzi yabatyali mali abancinci naphakathi ukuba bagxile kule nkampani yezothutho. Ngokungafaniyo nokwenzekayo kwiimarike zezemali zaseMelika apho isithembiso esenziwa licandelo elifanelekileyo. Yenye encinci ekufuneka uyithathele ingqalelo ukuvavanya ukuba kufanelekile ukuvula izikhundla kwinkampani enezi mpawu zikhethekileyo.
Kwelinye icala, ikwimeko ephezulu kakhulu yi ukuvela kwezithuthi kwaye ngaphezu kwako konke ngenxa yokuhamba kwabakhenkethi okukhoyo ehlabathini. Ezi datha zezamathuba amahle kakhulu kwicandelo kwaye akufuneki zivelise iingxaki ekulungelelanisweni kwamaxabiso abo. Ukuba akunjalo ngokuchaseneyo, oko kukuthi kukonyusa ixabiso lawo kwimarike yemasheya ukuya phezulu. Kodwa sijamelene nexabiso elikhethekileyo lemarike yemasheya enokusinika ngaphezulu kwesimanga ukusukela ngoku ukuya ngenxa yeempawu zayo ezikhethekileyo kunye nokuxhomekeka kwayo kakhulu kwioyile ekrwada kwiimarike zezemali.
Inkxaso kwi-4,50 euro
Elinye lamaqhosha kwindaleko yalo yexa elizayo kukuba ingaba liza kuyeka na ukwehla kwimarike yemasheya kwinkxaso ebalulekileyo ekhoyo ngoku kwii-euro ezingama-4,50 ngesabelo ngasinye. Kuba enyanisweni, ukuba uyigqithile, zininzi izinto ezinokwenzeka nokuba, kwaye kwimeko embi ungaya kuyo amanqanaba ajikeleze ii-euro ezimbini. Kodwa umbuzo omkhulu obonelelwa yinqwelomoya kukuba ingaba uza kubanakho na ukuthelekisa le ntlawulo kule minyaka izayo. Yonke idatha ayenzi ukuba sikrokre ukuba ayizukuba njalo. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, yonke imiqathango iyafezekiswa ukuze kubekho ukuncipha okukhulu kulo mvuzo wabanini zabelo.
Ngokunxulumene neziganeko ezifanelekileyo zamanani 279458, 279589, 279600 kunye 279915, iNkampani ibhengeza ukuba ukugqibile ukuthengwa, ukukhutshwa kwamanani kunye nokucinywa kwe-89,44% yeeBond eziguqulwayo ngenxa kaNovemba 17, 2020, kunye ne-ISIN XS1322536332 ("Iibhondi") ze Ixabiso lilonke le- € 447.200.000. Okokugqibela, iNkampani ikwazile ukuthenga nokucima iiBond ezimbini (2) ezingaphantsi kunalezo beziqatshelwe ekuqaleni kumanani afanelekileyo angama-279600 kunye nama-279915 ngenxa yokuba abanini beziBond bengakhange bazizise ngexesha lokuba zithengwe kwakhona. Ngenxa yoko, inani lilonke lamaBond afunyenweyo kwaye ekugqibeleni arhoxisiwe ancitshisiwe nge- € 200.000.
Ukufunyanwa kwenqwelomoya entsha
Iqela leenqwelomoya zamazwe ngamazwe (IAG) libeke iodolo yenqwelomoya ezisibhozo zeA Airbus A321XLR zeIberia nezintandathu zeAer Lingus, kunye neendlela ezili-14. Zombini ezi nqwelomoya ziphakathi kwabasunguli beenkonzo kwezi nqwelo moya zide zohambo olude. Ukuhanjiswa kokuqala kucwangciselwe i-2023.
I-A321XLR iya kusetyenziswa ukwandisa iinqwelo zokuhamba ixesha elide bobabini uAer Lingus noIberia. Inqwelomoya nganye iya kuxhotyiswa ngoqoqosho kunye neekhabhathi zeklasi yezoShishino kubandakanya nezihlalo ezihleli ngokupheleleyo. Baza kubonisa umdlalo wokuzonwabisa ofanayo, unxibelelwano kunye nokukhanya kwezibane njengesiqhelo senqwelomoya esitsha. Ezi nqwelo moya ziya kuvumela iAer Lingus ukuba isebenze ngeendlela ezintsha ngaphesheya konxweme olusempuma eUnited States naseCanada. Inkampani inee-A321neo LRs ezisibhozo eziphantsi kwengqeshiso yokusebenza kunye nokuhanjiswa kokuqala okucwangciselwe eli hlobo.
Ukuvela kwezithuthi zabakhweli
Abakhweli abangaphezulu kwezigidi ezingama-432,6 basebenzise izithuthi zikawonke-wonke ngoJuni, i-1,1% ngaphezulu kwenyanga enye ye-2018, ngokweedatha zamva nje ezivela kwiZiko leLizwe lezibalo (i-INE). Apho kuboniswa khona ukuba uthutho lwasezidolophini lonyuka nge-0,7% kwinqanaba lonyaka kwaye uthutho lwasezidolophini lwehla nge-0,1%. Ngaphakathi kwe-interurban, Iqaqambisa ukwanda nge-10,0% kwezothutho lomoya.
Ixabiso lotshintsho lwe inani labakhweli bezithuthi zikawonkewonke kaJuni xa kuthelekiswa noMeyi yi-7,0%. Ukwenza igalelo kuhlahlelo nokutolikwa kwedatha, le grafu ilandelayo ibonisa ukuvela kwenqanaba lenyanga labasebenzisi bezithuthi zikawonke-wonke kule minyaka idlulileyo.
Ngelixa kwelinye icala, ngokubhekisele kwezothutho olukhethekileyo kunye nolwazizo, idatha yakutshanje evela kwiZiko lezeNkcukacha-manani leSizwe iqinisekisa ukuba ngaphezulu kwe-53,5 yezigidi zabasebenzisi basebenzisa ezothutho olukhethekileyo kunye nokuqonda ngoJuni, nto leyo ebonisa ukonyuka kwe-5,4% kwizinga lonyaka. Inani labakhweli kwizithuthi ezizodwa lenyuka nge-5,8% kwaye lidlula abasebenzisi abazizigidi ezingama-29,1. Ngaphakathi koku, isikolo sonyuke nge-5,9% kunye nomsebenzi nge-5,8%. Kwinxalenye yayo, ukuthuthwa kokuqonda kukhule nge-4,8% xa kuthelekiswa kwinyanga enye kwi-2018, nangaphezulu kwabahambi abazizigidi ezingama-24,4.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Bolsa » IAG kwindlela enqumlayo kwi-Ibex